मलेसियामा श्रमिक अभाव चर्किँदै, नेपाली कामदार लैजाने तयारी ? - jagritikhabar.com
मलेसियामा श्रमिक अभाव चर्किँदै, नेपाली कामदार लैजाने तयारी ?
पछिल्लो समय मलेसियामा विदेशी श्रमिकको अभाव देखिन थालेको छ । कोरोनाका कारण विदेशी श्रमिक लिन प्रतिबन्ध लगाएको मलेसियामा श्रमिक अभावका कारण कलकारखाना, निर्माणलगायत क्षेत्रको काममा कटौती हुन थालेको त्यहाँका स्थानीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् ।
समाचारमा जनाइएअनुसार कोभिड–१९ का कारण नयाँ श्रमिक मलेसिया आउन नपाएको तर भिसा तथा श्रम सम्झौताको म्याद सकिएर विदेशी श्रमिक स्वदेश फर्किएपछि त्यहाँ श्रमिकको ठूलो अभाव देखिएको हो ।
यसैगरी, स्थानीय मलेसियन नागरिकले विदेशी श्रमिकले गर्दै आएको काम पनि नगरेका कारण पनि त्यहाँका उद्योग कलकारखानालाई समस्या भइरहेको समाचारमा जनाइएको छ । यस अगाडि रोजगारीमा रहेका मलेसियन नागरिकलाई पनि काममा टिकाइराख्न मुस्किल परेको रोजगारदाताहरूले बताउने गरेको समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।
मलेसियामा हाल झन्डै ११ लाख विदेशी श्रमिक कार्यरत रहेको मलेसियन नेसनल चेम्वर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रिजको तथ्यांकले देखाएको छ ।
सन् २०१८ को तथ्यांकअनुसार मलेसियामा विदेशी श्रमिकको संख्या १९ लाख रहेको देखिएको बताइएको छ । यसअगाडि मलेसियाले सन् २०२० को अन्त्यसम्म विदेशी श्रमिक नलिने र मलेसियन नागरिकलाई रोजगारी सुरक्षित गर्ने बताएको थियो ।
सो बन्देजलाई सन् २०२१ को अन्तिमसम्मका लागि बढाइएको र अहिले श्रमिकको चरम अभाव देखिएको समाचारमा जनाइएको छ । मलेसियन नागरिकहरू त्यहाँ उपलव्ध रोजगारीमा आकर्षित नहुनु पनि श्रमिक अभावको अर्को कारण रहेको बताइएको छ ।
एकातिर मलेसियामा स्थानीय नागरिकले त्यहाँ उपलव्ध रोजगारीमा रुची देखाएका छैनन् भने अर्कातर्फ त्यहाँ बेरोजगारी दरसमेत बढ्दै गएको देखाएको छ । त्यहाँ अहिले बेरोजगारीको दर ४.६ प्रतिशत रहेको समाचारमा जनाइएको छ ।